ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ. ဖွဲ.စည်းခြင်း ~ pyidawoo
3:29 AM Pyidawoo No comments
. (၁၂-၁၂-၁၀) တနင်္ဂနွေနေ.တွင် ဖူဆန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းတိုက်၌ မဇ္ဈိမယာန အသင်းအဖွဲ.ကို ဖွဲ.စည်းတည်ထောင်ရန် အခြေခံမူကြမ်းနှင့် အသင်းဝင်ပုံစံကို အဆိုပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဖူဆန်း၌ ဘာသာရေး လူမှုရေး အဝဝကို ပရဟိတစိတ်ထား အပြည့်အဝဖြင့် အစဉ်တစိုက် နှိုးဆော် ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုလှထွန်းကို ပထမဦးဆုံး အသင်းသားအဖြစ် အသင်းဝင်ရန် ဆရာတော်က တိုက်တွန်း၍ မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ.ဖွဲ.စည်းခြင်းကို စတင် ခဲ့ပါသည်။
တူညီသော ~စိတ်ထား၊ ဆန္ဒ၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် စွန်.ကြဲပေးကမ်းမှု၊ ကိုယ်ကျိုးစွန်. အနစ်နာခံမှု၊ အများအကျိုး သယ်ပိုးမှုတို.ဖြင့် ပါရမီမြောက် လုပ်ငန်းများးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ.ဝင် အဖြစ် လက်တွဲပါဝင်ကြပါရန် နှိုးဆော်တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
Posted in: မဇ္ဈိမယာန အဖွဲ.ဆိုင်ရာ